Xafiiska ROOBLE oo diiday qorshe cusub oo la sheegay in Imaaraadka damacsan yihiin | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Xafiiska ROOBLE oo diiday qorshe cusub oo la sheegay in Imaaraadka damacsan...
Xafiiska ROOBLE oo diiday qorshe cusub oo la sheegay in Imaaraadka damacsan yihiin
Muqdisho (Dalkaan.com) – Xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa beeniyey in dano siyaasadeed laga leeyahay gargaarkii ay Imaaraadka Carabta soo gaarsiiyeen Muqdisho 7-dii Janaayo ee loogu talo-galay abaarta dalka ku dhufatay.
Gargaarkaas kadib ayaa ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu Abu Dhabi ka raali-geliyey lacagtii ay garoonka Muqdisho ku qabteen sirdoonka Soomaaliya bishii Aprill 2018, isaga oo ballan-qaaday in dib loogu celin doono Imaaraadka.
Cabdirashiid Muuse, oo ah taxliiliye siyaasadeed oo fadhigiisu yahay Muqdisho, ayaa wakaaladda Wararka Turkiga ee Anadolu u sheegay inay caddahay in Imaaraadka ay si xooggan isugu dayayaan inay saameeyaan doorashooyinka Soomaaliya, si ay kursiga uga tuuraan madaxweyne Farmaajo.
Waxa uu sheegay in Imaaraadka ay kuu guuleysteen inay Rooble ka horkeenaan madaxweyne Farmaajo.
“Imaaraadka marnaba Soomaaliya kama aheyn bixiye deeq gaaraar ama meel kaleba, islamarkaana macaamilkeeda dibedda ee dalalka ay xasillooni darrada ka jirto waxaa xudun ah cayaar ay tahay inay ayada un guuleysato. Waxay ka faa’iideysataa xasillooni darrada iyo duruufaha bani’aadaminimo si ay u riixdo faa’iidooyinkeeda dhaqaale ee dalalka tabarta darran,” ayuu yiri.
Cabdirashiid ayaa sheegay in Imaaraadka ay taariikh u leeyihiin inay maal-geliyaan dhaq-dhaqaaqyada kacdoon iyo afgambiyada dibedda, wuxuuna soo jeediyey in gargaarkii ay dhowaan keeneen Soomaaliya looga dan leeyahay in lagu iibsado saameyn siyaasadeed.
“Haddii Imaaraadka ay daacad ka tahay gargaarka bani’aadaminimo ee Soomaaliya, marnaba ma aysan xiri laheyn isbitaalkoodii Muqdisho sanado kahor,” ayuu yiri.
Jawaabta xafiiska Rooble
Hase yeeshee, Liibaan Cabdi Cali oo ah agaasimaha warfaafinta xafiiska ra’iisul wasaare Rooble ayaa Anadolu u sheegay in Soomaaliya ay wajaheyso caqabado badan, oo ay ka mid tahay abaaraha, wuxuuna xusay in Rooble uu ku baaqay gargaar.
“Deeqda ka timid Imaaraadka waxay jawaab u tahay baaqa, mana arko wax arrimo siyaasadeed ah ama diblomaasiyad gargaar oo lagu saameynayo arrimaheena gudaha, sababtoo ah mowqifkeena waa cad yahay. Waa mid ku dhisan danaha aan wadaagno iy is-ixtiraam, waxaana ka fileynaa dal kasta inuu sidaas oo kale sameeyo,” ayuu yiri Liibaan.
Liibaan ayaa intaas ku daray in taariikh ahaan ay Soomaaliya xiriir wanaagsan la laheyd Imaaraadka, ra’iisul wasaarahana uu doonayo inuu joogteeyo xiriiradaas.
“Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waa ay isku xiran yihiin dhaqaale ahaan, islamarkaana go’aanka ra’iisul wasaaraha ee lagu sii daynayo lacagta la qabtay waxaa looga dan leeyahay inuu dhabaha u xaaro xalinta khilaafyada u dhaxeeya labada dal. Soomaaliya ma lahan lacagtan, waxaa leh Imaaraadka, waana in dib loogu celiyaa,” ayuu yiri.
Dhinaca kale, Xasan Cabdisalaan Guuleed oo ah cilmi-baare ayaa ku adkeystay in Abu Dhabi ay awooddeeda ku muujineyso gobolka, ayada oo adeegsaneysa ganacsiga iyo diblomaasiyadda, hase yeeshee aysan aheyn halis saameyn karta dadaallada dib u dhiska Soomaaliya.
“Inkasta oo aysan cidna ogeyn danta dhabta ah ee Imaaraadka ay ka leeyihiin Soomaaliya, haddana Imaaraadka waa ay joogeen Soomaaliya ayaga ka caawinaya gargaarka iyo tababarka militariga. Si kastaba, Imaaraadka, si la mid ah dal kasta oo kale, dan waa ay ka leeyihiin Soomaaliya, waxaan ku aalnaa gobol muhiim ah oo ka mid ah qaaradda,” ayuu Xasan u sheegay Anadolu.
Isaga oo tixraacaya gargaarkii ay dhowaan keeneen Muqdisho iyo isu soo dhowaanshaha labada dhinac, ayaa Xasan waxa uu ku qeexay “tallaabo muhiim ah oo soo daahday”.
“Haddii ay noqoto abaar nolosha halis gelineysa ama dagaallo soo noqnoqda oo ka dhashay doorashooyinka, Soomaaliya waxay hadda ku sugan tahay xaalad halis ah. Sidaas darteed, Soomaaliya way ku faraxsan tahay kaalmo kasta,” ayuu yiri.
Xukuumadda Rooble ayaa maalmihii tegay qaaday tallaabooyin ay ugu muujineyso Imaaraadka Carabta inuu dhab ka yahay isbeddelka siyaasadeed, waxaana ka mid ah inay si weyn uga falcelisay una cambaareysay weeraradii ay Xuutiyiinta ku qaadeen magaalada Abu Dhabi, Isniintii tagtay.
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo maanta guddoomiyey shirka golaha wasiirada ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah...
Everton oo Lacag Waalan Ku Doonaysa Richarlison
Laftagareen oo weerar culus ku qaaday Rooble, una rogay xiisadda mid...
Xog: SACIID DENI iyo ku xigeenkiisa oo heshiis gaaray
WAREYSI QOSOL BADAN , OOMAAR BARBAR & AROOS LAGA NAXO . #SUBSCRIBE
Wararkii ugu dambeeyey ee doorashada HOP#063 iyo HOP#011
Xog: Dalka ugu horreeya ee madaxweyne Xasan Sheekh uu booqasho ku...